GOMO REBERNESE GOMO RINOBEREKA RUZIVO NEMIFANANIDZO - IMBWA
Gomo reBernese Gomo Rinobereka Ruzivo neMifananidzo
Harvey weBernese Mountain Imbwa pamwedzi gumi yekubatira achishanda sembwa yekurapa
Chinyorwa cheBernese Gomo Imbwa Sanganisa Inobereka Imbwa
Imbwa yeGomo reBernese
Bern · ese Moun · tain Imbwa
Bhurawuza rako haritsigire tag yekuteerera.
Iyo Imbwa yeGomo reBernese imbwa hombe, yakasimba, yakasimba, inononoka imbwa. Muviri wakareba zvishoma pane kureba. Musoro wakafara wakatsetseka pamusoro nehuremu hwakaenzana. Iyo tomu yakasimba uye yakatwasuka. Mazino anosangana mune chigero kuruma. Nzeve dzepakati nepakati, dzakatetepa dzakagadzwa kumusoro uye dzakatenderedzwa kumucheto. Makumbo akatwasuka akasimba. Muswe une gwenzi unotakurirwa pasi. Dewclaws anowanzo bviswa. Tsoka dzakatenderedza nezvigunwe zve arched. Iyo jasi risingadziviriri jasi rakareba zvine mwero, gobvu uye zvishoma wavy kana yakatwasuka. Iyo imbwa iri tricolor ine macompetical mamaki erima, ngura uye chena. Hwaro hwembwa hutema. Imbwa ine mwenje muchena pachipfuva uye chena mumusoro, zvigunwe uye tip yemuswe. Ngura iri pamatama anosvika kumakona emuromo, pamusoro peziso rimwe nerimwe, kune rumwe rutivi rwechifuva, pamakumbo ese mana uye pasi pemuswe.
Idzi imbwa dzinofara dzinoda vana. Ivo vakangwara kwazvo, nyore kudzidzisa uye imbwa dzinotarisisa, asi kwete zvakanyanya. Imbwa yeGomo reBernese ichave shamwari yako yehupenyu. Kuzvivimba, wakangwarira uye wakanaka hunhu, ive shuwa ku kushamwaridzana zvakanaka sembwanana . Idzi imbwa dzinononoka kukura, dzinoita kunge imbwa dzakareba kupfuura mamwe marudzi. Ivo vane hushamwari nevasingazive, uye vanowanzo kuve vakanaka ne dzimwe mhuka dzinovaraidza nembwa. Iyo Bernese inoda kuve nevanhu uye isina kuvharirwa kuseri kwemba kana kennel. Idzi imbwa dzinonetsekana uye dzinofanirwa kudzidziswa zvakasimba, asi zvinyoro nyoro. Varidzi vanongomhanyisa nyaya nembwa iyi kana vasiri kuratidza hutungamiri hwepanyama kune imbwa, vachimubata zvakanyanya semwana wavo uye kushaya ruzivo rwekuti imbwa dzipi dzinofanirwa kuve dzakagadzikana pfungwa. Varidzi vanokundikana kugutsa imbwa vanhu vari alpha vanogona kuzviwana vaine imbwa yakasiyana zvachose pane izvo zvinotsanangurwa pamusoro. Kuti imbwa inzwe yakachengeteka inoda kuziva zvakajeka mitemo kuitira kuti vateedzerwe, vachibudirira muchimiro, pamwe ne zuva nezuva kurongedza kufamba kugutsa hunhu hwayo kutama. Iyo Imbwa yeGomo reBernese rakaitirwa basa rekunyora uye inogona kudzidziswa kudhonza ngoro kana ngoro.
Kureba: Varume 24 - 28 inches (61 - 71 cm) Vakadzi 23 - 27 inches (58 - 69 cm)
Kurema: Vanhurume 85 - 110 mapaundi (38 - 50 kg) Vakadzi 80 - 105 mapaundi (36 - 48 kg)
Iyo Gomo reBernese Gomo rinowanzoitika bloat , gomarara uye matambudziko eyelid, chiuno negokora dysplasia. Kuwedzera uremu zviri nyore. Usanyanyisa. Kazhinji mast mamota mamota .
Imbwa dzeGomo reBernese hazvikurudzirwe hupenyu hwemba. Ivo vari vasingashande mukati meimba uye vanozoita zvakanakisa neinenge hombe, yakakomberedzwa-muyadhi. Nekuda kwejasi ravo gobvu ivo vane hanya nekupisa uye vangatonyanya kuve vari kutonhora kutonhora.
Imbwa hombe dzinoshanda senge idzi dzinoda kugara uchirovedza muviri, izvo zvinosanganisira a kufamba kwemazuva ese .
akakura sei makonzo anotsemura
Anenge makore 6-8. Ivhareji yehupenyu hweBernese yakadzikira mumakore achangopfuura kubva pamakore gumi nemaviri kusvika pamatanhatu kusvika pamatanhatu makore. BMD Club yeAmerica yakaita ongororo yehutano muna 2000 nembwa chi1 322. Avhareji zera rerufu raive makore 7.2. Cancer zvinosuruvarisa kuti chikamu chakakura kwazvo chenyika yeBerner uye vazhinji veBerners vanofa vachiri vadiki. Rimwe bhuku rinoti 'Ndinoziva vanoverengeka vakafa nekenza pazera remakore 3-4 uye mumwe akafa mazuva maviri zuva rake rekuzvarwa kechipiri risati rasvika. Iyo BMD Kirabhu yeAmerica iri kutsvaga zvine mutsindo nyaya yegomarara iyi! Tinofanira kuona kana tichigona kupedza mamiriro ezvinhu anosiririsa aya. '
Zvinosiyana kubva pa1 - 14 vana, avhareji masere
Mazuva ese kusvika kubrugwa kwevhiki kwejasi gobvu rakakosha kwakakosha, nekutarisirwa kwakanyanya kunodiwa kana jasi richierera. Kugeza kana kugeza sipo sezvinodiwa. Rudzi urwu ndeye mwaka, inorema kuteura.
Iyo imbwa yeGomo reBernese yakatanga mumakomo eSwitzerland. Mazhinji muzana ramakore rechi 18 mifananidzo inoratidza imbwa dzinoratidzika kunge imbwa yerudzi rweBernese. Rudzi urwu rwakatumidzwa zita reCanton yeBern muSwitzerland. Ivo vaive vachishanda imbwa zvakanyanya kugona pabasa rekunyora, vachidhonza ngoro kumusika. Ivo zvakare vaishandiswa kutyaira mombe dzemukaka, kutarisa papurazi uye seshamwari kuvarimi. Pakupera kwezana ramakore rechi19 dzimwe imbwa dzakawanda dzinoshanda dzaiunzwa kuSwitzerland, izvo zvakaunza huwandu hwevaBernese pasi apo vashandi vakatanga kushandisa dzimwe mhando dzembwa. Kuedza kwakaitwa neboka revanhu vanosanganisira Muzvinafundo Albert Heim naFranz Schertenleib kuchengetedza rudzi. Vakatenderera vachitsvaga imbwa dzainge dzasara dzavaigona kuitira kudzikamisa vaBernese. Nhasi uno rudzi rwunoita shamwari inoshamisa uye nanhasi nanhasi vanofarira chero basa rekunyora raunogona kuvapa. Matarenda erudzi urwu ari kutevera, kufudza, kutarisa, kuchengetedza, kutsvaga uye kununura, kurongedza uye kuteerera kwemakwikwi.
Mastiff, AKC Inoshanda
ANKC = YekuAustralia National Kennel Club
CCR = Canada Canine Registry
CKC = Canadian Kennel Kirabhu
CKC = Continental Kennel Kirabhu
KCGB = Kennel Kirabhu yeGreat Britain
NAPR = North America Yakachena Registry, Inc
NZKC = New Zealand Kennel Kirabhu
Imbwa yeBernese yeMakomo eBernese— 'Ivan akangoshandura makore gumi. Akawana CH yake pazera remakore maviri. Iye imbwa hombe imbwa, ari nyore kuenda uye anoda dumbu kukwiza. Anoda matoyi anotsvedza uye anoatakura kwese kwese naye. Anorara navo pedyo. '
Vargas weBernese Mountain Imbwa— 'Kwaziso kubva kuNorway kubva kuVargas ane makore matatu Berner Sennen.'
Kleopatra Herus Poseidonas, Mufananidzo nerubatsiro rwaKennel Poseidonas
Shasta iyo yakachena Berner pavhiki masere
Shasta iyo yakachena Berner pavhiki gumi nemana
Ripley weBernese Mt. Imbwa pazera remakore mashanu neGabby iyo Bernese Mt. Imbwa imbwanana pamasvondo masere ekuberekwa
'Pfungwa yakajairika yemwana wangu ane mwedzi gumi nemasere Berner (Tally) uye mwanakomana wemakore matatu'
Ona mimwe mienzaniso yeBernese Mountain Imbwa
Bernese Gomo Imbwa Mifananidzo 1
Nei mhuno yembwa yangu yakashanduka kubva nhema kuita pink?
st bernard kusanganisa nelebhu
wetsiva uye wechiGerman mufudzi mbwanana
treeing feist vs gomo feist
saint bernard collie sanganisa imbwa dziri kutengeswa
ndiratidze mufananidzo wenzombe inotyisa
american canine hybrid kirabhu vafudzi